Ebe 8 ka amachibidoro ụmụ nwanyị n'ụwa | Akụkọ Njem
Maria | | General, Noticias
N’akụkọ ihe mere eme nile, ọ dị nwute na a na-akpa ụmụ nwanyị asị n’ihi mmekọahụ ha na agbanyeghị na ọtụtụ enwegoro ihu nha anya n ’ụwa, ugbu a enwere ọtụtụ ebe amachibidoro ụmụ nwanyị ịbịa n’ihi okpukpe ha ma ọ bụ okpukperechi ha. egwuregwu, n'etiti ihe ndi ozo. O siri ike ikwere mana ọ bụ eziokwu.
N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-eleta ụfọdụ n'ime ebe ndị a na-anaghị anabata ụmụ nwanyị taa, ha ga-anọrịrị iji ghara inye ndị ọzọ nsogbu ma ọ bụ maka ahụike ha.
1 Haji Ali Dargah Shrine na India
2 Ugwu Omine na Japan
3 Ogige Mmiri Galaxy na Germany
4 Ugwu Athos na Gris
5 Klọb ndị nwoke na Italy
7 Te Papa Museum na New Zealand
8 Osimiri Mlimadji na agwaetiti Comoros
Haji Ali Dargah Shrine na India
Alakụba Haji Ali Dargah bụ otu n'ime ebe atụ kachasị dị na Bombay ma na-adọta ọtụtụ puku ndị nleta kwa izu, mana amachibidoro ụmụ nwanyị ịbanye n'ili n'ihi na a na-ewere ya dị ka mmehie dị oke njọ. N’ezie, e nwere ihe ịrịba ama na-egbochi machibidoro ụmụ nwanyị ịbanye.
Kemgbe afọ 2011, ntọala na-elekọta ebe nsọ machibidoro ha ịbanye n'ụlọ alakụba a nke ndị Alakụba, ndị Hindu na ndị njem nleta na-agakarị. Otu n’ime ihe kpatara e ji gbochie ha ịgafe bụ na ha nwere ike ịbụ n’ụbọchị nsọ ha, arụmụka a na-ahụkarị n’ọnụ ndị na-achọghị mgbanwe ka ha ghara ịbata n’ebe ndị dị nsọ.
Haji Ali Dargah Alakụba dị na agwaetiti a na-enweta na mmiri dị ala. E wuru ya na 1431 maka ncheta nke onye ahia bara uba nke gbahapụrụ ala ya maka njem uka na Mecca.
Ugwu Omine na Japan
Na 2004 Ugwu Omine bu UNESCO kwuputara ya na ihe nketa nke uwa ma amachibidoro ndi nwanyi ohere. Ihe kpatara ya bụ na ịma mma ya nwere ike ịdọpụ uche ndị njem ala n'ụzọ ha na-aga ịkpa ọchị na ntụgharị uche miri emi.
Templelọ nsọ ahụ dị n'elu ugwu bụ isi ụlọ ọrụ nke Shugendo kwesịrị ntụkwasị obi nke Buddha Buddha. N'ime oge Heian (795-1185), ụzọ njem njem Shugendo ghọrọ ihe ewu ewu na, dịka akụkọ si kwuo, ndị njem ala nsọ dara iwu ma ọ bụ gosipụta obere okwukwe ka nkwonkwo ụkwụ ha kwụgidere n'elu ugwu.
A machibidoro ụmụ nwanyị ịbanye n'ụzọ njem njem niile ruo na 70s ma a ka nwere ụzọ nke ụzọ ụmụ nwanyị na-enweghị ike ịpụ.
Emeela mgbalị iji luso mmachibido iwu a ogologo oge, mana enweghị isi. Ndị na-akwado ya na-arụ ụka na ọ bụ ọdịnala dị afọ 1.300 ma kwuo na ịkpa oke nke nwoke na nwanyị abụghị otu ịkpa oke. Kaosinadị, akpọrọ Ugwu Omine aha dị ka Ebe Ihe Nketa Worldwa site na Unesco dịka ndị nkwado mba ụwa machibidoro ya.
Ogige Mmiri Galaxy na Germany
Nke Germany bu ikpe di omimi. Ogige a bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Europe ma machibidoro ụmụ nwanyị isi ihe kachasị mma: mmịfe X-Treme Faser. Ihe kpatara ya bụ na mgbe ị na-agbadata ya, a na-eru ọsọ ọsọ nke ihe karịrị 100 km / h na ọtụtụ ụmụ nwanyị ekwuola na enwere ahụ erughị ala na akụkụ ahụ ha mgbe ha kwụsịrị iji ya. Redirịba ma eziokwu.
Ugwu Athos na Gris
Laa azụ na narị afọ nke XNUMX, eze Byzantine machibidoro ụmụ nwanyị ịbịaru mpaghara dị nsọ nke Ugwu Athos ka ọ ghara ịnwa ndị mọnk bi ebe ahụ. N’otu n’ime ala peninsula atọ ahụ mejupụtara Chalkidiki bụ ugwu a ebe ndị mọnk Ọtọdọks nke Russia biri ihe dịka otu puku afọ.
Ebe a Unesco kwuru na ebe a bụ World Heritage Site na 1998 mana n'ime ndị ọbịa 40.000 ọ na-anata kwa afọ, enweghị ụmụ nwanyị n'ihi na ha ga-anọrịrị, ọ dịkarịa ala mita 500 site na ebe a. Ha enweghị ike ịnweta ikikere pụrụ iche nke a ga-achọrịrị tupu oge ahụ iji hụ Ugwu Athos.
Mana nke a abụghị ihe niile, dịka usoro ochie siri kwuo, ụmụ anụmanụ enweghịkwa ike ịzọ ụkwụ n'ala ha. Naanị otu bụ nwamba, n'ihi na ha bara uru maka ndị mọnk na-achụ nta òké.
Klọb ndị nwoke na Italy
Na mba Europe a, e mere atụmatụ na enwere ihe dị ka klọb iri anọ ebe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị isi na ndị ọchụnta ego na-ezukọ iji kwurịta azụmahịa na akụnụba. Ma, a naghị ekwe ka ụmụ nwanyị sonye na mkparịta ụka ha n’ihi na anaghị ekwe ha abanye.
Ihe yiri nke a na-emekwa na Basque Country na obodo gastronomic na ụfọdụ kafenion na agwaetiti Greek. Anabataghị ụmụ nwanyị na ụlọ oriri na ọ traditionalụ andụ ọdịnala ndị a ma jupụta na ụmụ nwoke na-egwu kaadị ma ọ bụ na-ekwu okwu.
Na mba a, a machibidoro ụmụ nwanyị iwu ebe ọha niile ọ gwụla ma nwoke ga-esonyere ya. Dị mfe ma na-akpaghasị.
Te Papa Museum na New Zealand
N'ime ụlọ nzukọ nke ebe ngosi ihe nkiri dị na Te Papa, a na-eme njem site na akụkọ ihe mere eme nke New Zealand site na ihe karịrị 25.000, nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke uwe na foto pụtara.
N'okwu a, ọ dị ka machibidoro ịbanye ụmụ nwanyị abụghị mkpokọta, mana maka ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ ndị nwere iwu. O doro anya na, dị ka nkwenkwe nke ụfọdụ okpukpe a na-eme n'ógbè ahụ, a na-ewere ụmụ nwanyị dị ka "ndị na-adịghị ọcha" n'oge ahụ. Ugbu a, kedu ka ụlọ ebe ngosi ihe nka ga esi enyocha nke ndị ọbịa bịara nsọ?
Osimiri Mlimadji na agwaetiti Comoros
Osimiri a dị na Comoros Islands na ọ bụ ezie na mmadụ niile nwere ike ịnweta saịtị ahụ, ọ dị ka n'oge na-adịbeghị anya ndị ọchịchị machibidoro ụmụ nwanyị ịbanye n'ihi nrụgide nke ụfọdụ ndị isi okpukpe na mpaghara ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ebe 8 dị n'ụwa machibidoro ụmụ nwanyị iwu
Nwee obi ụtọ otu izu na Jamaica